Cristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Isagoo Balanqaad Sameeyay Dhalashadiisa 36aad – Garsoore Sports
Cristiano Ronaldo Oo…
Cristiano Ronaldo Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Isagoo Balanqaad Sameeyay Dhalashadiisa 36aad
Weeraryahanka xulka Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa balanqaad sameeyay dhalashadiisii 36aad oo uu maalintii shalay ahayd u debaaldegayay.
Xiddigan oo loo tixgeliyo mid kamid ah cayaartooyda ugu fiican taariikhda kubbada cagta, ayaa sidoo kale u debaaldegay sannadkiisii 20aad ee uu ahaa xirfadle kubbada cagta ah waxaana uu bartiisa Instagramka uu farriin qalbti taabad ah ugu gudbiyay 260ka milyan ee qof ee halkaasi ka raaca.
Inkasta oo ay jiraan koobab badan oo uu ku guulleystay Ronaldo sannadihii la soo dhaafay, haddana waxay u muuqataa dhiirrigelintiisa iyo xamaasadda uu u qabo cayaarta uu ka fiicanyahay sidii hore, iyadoo 18 bilood oo kale ay uga harsan tahay qandaraaskiisa Juve.
Ronaldo oo qiireysan ayaa u sheegay taageerayaashiisa Instagramka: ‘36 sano jir, waa wax aan la rumaysan karin! Waxaan dareemayaa in waxwalba ay shallay billoowdeen, laakiin safarkan waxaa ka buuxa qibrado iyo sheekooyin lagu xasuusto. Kubadeyda koowaad, kooxdeyda koowaad, goolkeeygii ugu horreeyay… Waqtiga wuu duulayaa! ‘Laga soo bilaabo Madeira ilaa Lisbon, laga bilaabo Lisbon ilaa Manchester, laga bilaabo Manchester ilaa Madrid, laga bilaabo Madrid ilaa Turin, balse waxaas oo dhan kasokoow, laga soo bilaabo qalbigayga ilaa adduunyada… laga soo billaabo meesha ugu hooseeysa qalbigeyga ilaa dunida…waxaan bixiyay wax walbo ee aan awooday, marnaba gadaal uma laaban marwalbana waxaan isku dayay inaan soo bandhigo nooceeyga ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
‘Taa beddelkeeda, waxaad i siiseen jacaylkiina iyo qaddarintiina, joogitaankaaga iyo taageerada aan shuruud lahayn. Taasna, waligey ma awoodi doono inaan idinkaga mahad celiyo si ku filan. Anigu waxba ma aanan sameyn karin adinka la’aantiina. ‘Marka aan u dabaaldegayo dhalashadeyda 36aad iyo sanadkeyga 20aad ee xirfadle ahaan kubbadda cagta, waxaan ka xumahay in aanan idiin balan qaadi karin 20 sano oo dheeri ah siddaan ah. Laakiin waxa aan idiin balan qaadi karo, waa inta aan sii wado, waligiin ma iga heli doontiin wax ka yar boqolkiiba 100 aniga! ‘Waad ku mahadsan tihiin mar labaad taageeradiina oo dhan iyo fariimihiinna naxariista leh iyo dadaallada aad wadaan maanta. Micno weyn ayey ila leedahay dhammaantiina waxaad gaar ugu leedihiin qalbigayga meel gaar ah. ’
Chelsea Oo Dib Ula Saxiixaneysa Hazard, Salah Oo Baxaya , Mourinho Oo La Ceyrinayo & Wararkii Ugu Dambeeyay
Arsenal Oo Lasoo Saxiixaneysa Weeraryahan Halis Ah, Upamecano Oo Bayern Ku Biiraya & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa